नर्सिङ | SwasthyaNews.Com Nepal's Leading Health News Portal
चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पिजी)को एकिकृत प्रवेश परीक्षा असोज २७ गतेदेखि लिने भएको छ। आयोगले असोज २७, २८ र २९ गते परीक्षा लिने भएको हो। आयोगले परीक्षाका लागि असोज १ देखि १५ गतेसम्म फर्म भर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ...
रातदिन विरामीको सेवामा खटिने नर्सको मासिक तलव नेपालका अस्पतालमा कति होला ? २० हजार, ३० हजार वा ४० हजार ? होइन, तलव त मासिक छ हजार पो छ । त्यो पनि छ महिना भोलेन्टियर गरेपछि । ...
नेपाल नर्सिङ संघले बिरामीको सेवामा खटिने नर्सहरुलाई कतिपय अस्पतालहरुले सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा पनि कम दिने गरेको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ...
बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) मा १ हजार ५ सय ३९ नेपाली कार्यरत रहेको खुलासा भएको छ । संसदीय अनुसन्धान समूहले तयार पारेको रिपोर्टमा एनएचएसमा ११ लाख १३ हजार २ सय ८८ जनशक्ति कार्यरत रहेकोमा नेपाली उक्त संख्यामा कार्यरत रहेको देखिएको हो । ...
आइलिन कूम्बर १९५१ को जुलाईमा नर्स क्याडेटका रुपमा प्रवेश गर्दा १५ वर्षकी मात्र थिइन् । १९७६ जनवरीमा मात्र उनी रजिष्टर्ड नर्स भइन् । त्यसयताका कयौं दशकमा उनले आफ्नो करिअरमा थुप्रै उतारचढाव देखिन् । ...
सेतो पोसाक लगाएर बिरामी हेरविचार गरिरहेका नर्सहरूको मन हिजोआज शान्त छैन । उनीहरू पेसागत सम्मान र सुरक्षा माग्दै आन्दोलित छन् । खास मुद्दाका आधारमा सडकमा ओर्लने बानी परेको नागरिक तप्कालाई किन हो, अझै उनीहरूको आवाजले छोइसकेको छैन । ...
केही समयअघि भएको एक अध्ययन अनुसार अण्डाको बोक्राले छालालाई निकै फाइदा पुर्याउँछ । अण्डाको बोक्रामा पाइने प्राकृति एसिड र गुणले छालाको सफाई गर्दै त्यसलाई चम्किलो बनाउँछ । त्यसकारण अर्कोपटक अण्डाको बोक्रालाई फाल्नुभन्दा पहिले एकपटक अवश्य पनि सोच्नुहोस् । ...
नर्सहरुले पेशागत दक्षतालाई निरन्तर अपडेट हुनुपर्ने बताएका छन् । ...
प्रशन्न हुनुहोस । आफूलाई परिचय दिनुहोस। हात मिलाउन हात लम्काउनुहोस । बिरामीका आँखामा ३ देखि ५ सेकेन्ड हेर्नुहोस । आँखा आँखाबिचको सम्पर्क निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकी यसले इमान्दारीता र खुलापनलाई व्यक्त गर्छ । तपाईले आफ्नो आवाज भन्दा पनि इशाराले बिरामीलाई डिल गर्नुहोस । ...
नेपालमा नर्सिङ पेशाप्रतिको आकर्षण घट्दो, १० प्रतिशत नर्स विदेश पलायन
वर्षेनी नर्सको उत्पादन हुँदै आएपनि रोजगारीको अवसर नपाउँदा अहिले नर्सहरु धेरै संख्यामा बिदेश पलायन भईरहेका छन । ...